Daawo: Sawiradda Suxufiyiinkii ka Qayb galay Siminaarkii Jabuuti...
Muqdisho (Luulyo 3, 2008) - Muddo ku dhaw 10 maalmood ama laba toddobaad ahba waxey indhaheyga qabaneyeen qoraalo looga hadlayo maalinta xorriyadda Soomaaliyeed, waxaana maqlayey masuuliyiin hambalyo direysay, waxaase igu soo noqnoqotay su’aal ah “Soomaaliya xorriyadda la sheegayo ma qaadatay weli?”
Anigu waxaan ahay 30 jir, saxafi ah, muddo 8 sanadood ahna ku soo dhax jirey saxaafadda, shan sanno oo ka mid ah waxaan wax ku qoraayey saxaafadda reer galbeedka, marnaba ma dareemin in ay jirto xorriyad ay heshay ummadda Soomaaliyeed noocey doontaba ha ahaatee.
Xorriyadda waxaa qaadata ummad leh Dhul, Calan, Af iyo Maamul madax banaan, Soomaaliya marka la eego xorriyadeeda waxaa jirta dhawr halbeeg oo ay tahay in aan ku cabirno.
Soomaaliya waa intee dhul ahaan, dadkeeduse intey la eg yihiin?
Dadka Soomaaliyeed oo dhami xorriyad ma heystaan?
Inta la yiri xor baad tihiin yaa maamula?
Soomaaliya oo ka koobneyd 5 gobal oo waaweyn ayaa waxaa la yiri waxaa xor ah 2 gobal oo kaliya, taas oo xorriyadda la heysto ka dhigeysay 40% (40 boqolkiiba), waxaana gumeysi ku jiray 60% boqolkiiba, inkastoo gor dambe oo 1977 dii la yiri hadana Jabuuti baa xor ah oo gooni loo jaray.
Marka aan eegno dhanka qeybaha la siiyey xorriyadda waxaa maamulkooda loo dhiibay dhamaanba caruurtii ay soo barbaariyeen gumeystayaashii oo iyagana ah dad aad ugu shaqeeyey wax yaabihii uu gumeytuhu u igmaday.
Waxaa hubaal ah inuusan jirin qof ka mid ahaa dadkii la dagaalamay gumeystayaashii oo lagu sharfay inuu talada dalka Soomaaliyeed ka qabto wax xil sare ah Hadduu jirose waa kee? Jawaabtu waa furan tahay.
Dhibaato aan harin oo ka daran joogista gumeysiga waxaa ka mid ah in la qaatay in lagu shaqeeyo mabaadiida gumeystayaashii, afkoodii iyo dastuurkoodii.
Dhamaanba waraaqihii lagu isticmaalayey xafiisyadana waxaa lagu qoray afkii gumeystaha, taas oo ka dhigeysa in aan laga xoroobin balse ciidankiisii la yiri “Nasta aan idin adeegnee” oo kuwo Soomaaliyeed loogu dhiibay waajibaadkii.
Ma saldhigan siyaasadii ay la yimaadeen caruurtii gumeysiga, iyadoo uu dalka ku jirey jahwareer ayaa waxaa hadana dhacday ka dar oo dibi dhal, waxaa dalkii qabsaday xukunkii militariga oo isagana dhamaanba wixii xorriyad iyo xuquuqaad ah oo ay lahaayeen ka xayuubiyey dadka Soomaaliyeed.
Maamulka milateriga wuxuu xabsiyadda dhigay dadkii aqoonta lahaa ee isku dayey in ay saxaan qaladaadkii uu ku kacaayey, waxaana kacaankii asalkiisu ka soo jeeday diin la’ aanta loo bixiyey kacaanka barakeysan.
Ugu dambeyntii madaxweynihii dalka wuxuu ku dhiiraday inuu kitaabkii quraanka uu yiraahdo aayaadka ku yaala waa qalad, kuna bedelo wax la yiraahdo xeerka qoyska.
In Badan ayaa dhihi doonaan Madaxweyne Siyaad Barre wadani buu ahaa ee sabab wax looga sheego ma lahan, laakiin haddii uu dalka difaaci lahaa, dadkana xor ka dhigi lahaa oo uusan caburin laheyn maanta lama joogeen halkii la gaaray.
Hadddii aan u soo laabto ujeedka qormadda, waxaan todobaadkii naga dhamaaday iyo kan aan ku jirno horaantiisi dhageystay C/laahi Yuusuf Axmed, Nuur Cadde iyo Cadde Muuse oo ummadda Somaaliyeed uga hambalyeynaya 1-da Luulyo, maalinta xornimadda Soomaaliyeed iyo Sheekh Shariif oo u tacsiyeynaya Ummadda.
Fariid…hambalyo haddii loo diraayey shacabka Soomaaliyeed ee xorta ah, shacabkaasi ma joogo qarnigan waxaa loo hambalyeyn doonaa marka ay xoroobaan, haddii loo hambalyeynayey kuwa haatan noolna Soomaaliya maanta xor ma ahan, xorriyaddeediina inta lumisay ayey ka mid yihiin sedaxda masuul ee hambalyada dirtay.
Haddaanan qaldaneyn, weli maanan maqlin meel ay sedaxdani masuul kaga tacsiyeynayeen ummadda Soomaaliyeed kumanaankii ay dileen Xabashidu, malyuumaadkii ay barakiciyeen iyo kumanaankii ay dhaacwa u geysteen guryahoodiina inta ka dumiyeen hadana ka degeen.
Masuuliyadda waa wax adduun iyo aakhiraba lagu xisaabtami doono, cidda maanta sidey doonto u hadasho oo dafirta dembiga ay gashay waxaa jirta xisaab aan la dhaafi doonin, lagana baxsan doonin maalinta aakhiro.
Bishii April 2007, waxaa magaaladda Muqdisho lagu xirtay injineer Soomaaliyeed oo caan ah, waxaana xirteen ciidanka Itoobiyaanka, iyagoo ku eedeeyey inuu yahay argagaxiso, ka dibna galaangal la sameeyey ayaa loo tagay C/laahi Yuusuf oo ku fadhiya kursigii madaxtinimada dalka.
C/laahi wuxuuna qoray warqad uu amar ku siinaayey in la siidaayo injineerka, laakiin amarkii intaan saraakiishii sare la gaarin waxaa soo diiday ninkii askariga ahaa ee Itoobiyaanka ahaa ee ugu horeeyey ee warqadda loo geeyey.
Inuu sii gudbiyo iskaba daaye isagii ayaaba ka soo jawaabay oo yiri “ninkan waxaan deyneynaa markii aan ogaano inuusan Alqaacida aheyn ee ku deyn meyno amarka C/laahi Yuusuf”
Ayaan-darrada intaas kuma ekaane waxaa loo tagay Cali Maxamed Geedi oo la is yiri amuu C/laahi kaga faro dhuudhuuban yahay xaga Itoobiyaanka, laakiin waxba kama uusan galin hawshii oo amarkiisiina la diid.
Haddii ay jirto xorriyadi loo dabaaldego, la isugu diro hambalyo, xorriyadda jirtaa waa taas uu heysto askariga caddaawadda ka buuxdo ee Itoobiyaanka ah.
Xorriyad daaye, Xaq la gumeyste ma leenahay?
La gumeystaha wuxuu xaq u leeyahay in cidda gumeysanaysa ay u ogolaato inuu yahay qof ku hoos jira gumeysigeeda, taas oo u sahleysa in maatida la nadabgeliyo, waloow dhibaato loo geysto dadka aqoonta leh iyo inta gobanimo doonka ah.
Uur jiifka Soomaaliyeed ee hooyadiis caloosheeda ku jira dembiile ayuu ka yahay xaga itoobiyaanka, waayo waxaa qof walba og yahay in November 2007 ay xaafadda Black Sea ku dileen Xabashida haweeney uur leh, taas oo ay xabadaha kaga dhufteen caloosha si ay u dilaan waxa caloosheeda ku jira, sidoo kalana isla xaafadaas ayey aheyd meeshii ay ku dileen haweeney iyo labadeeda caruurta ah oo kala ahaa wiil iyo gabar, kuwaas oo ay intay qoorta ka xireen geed ka soo laadlaadiyeen, hooyadoodna intay kufsadeen ka dib dileen.
Sida wiilkasta oo Soomaaliyeed yaraantiisii ama markii uu hooyadiis dhabteedii ku cayaarayey loogu heesi jirey “Caddow aragsamoow, amxaarada ureysiyo, af huuraalayaashii, injirrey dhamaanteed, ab kuuma galinoo, ee baa kuu adeegay” ayaa wiilka amxaarka ahna ay hooyadii ugu soo abaabisay in magaca Soomaali qofka wataa uu yahay cadowgiisa.
Waxaa la yaab leh maanta oo marrastii iyo agoontii madaafiic lagu laayey, Masaajidadii lagu xaaray, Musxafkii Quraanka lagu istaagay oo saxarada lagu tirtay, dugsiyadii quraanka loo bedelay musqulo ay ku saxaroodaad axmaaro, iskuuladii iyo isbitaaladii laga dhigay xerooyin ciidan, culumadii la xasuuqay, 2 sano jirka Soomaaliyeed uu yahay dembiile lagana toogto wejiga, qofka XORRIYADDA u dabaal dega ama hambalyo u dira waa ayaandarro.
Meles Zenawi oo dadkiisa kula hadlayey fagaare ku yaala Addis Ababa ka dib markii ciidankiisa galeen Caasimadda Soomaaliya ayaa wuxuu yiri “Soomaalida Sedax kaga dayda, 1. Cadeyga iyo Nadaafadda kaga dayda, 2. Isu kaalmeynta kaga dayda, 3. Habeen guureyntana kaga dayda” wuxuuna intaas u raaciyey “Balse sedax ha kaga dayanina, 1. Is dilka ha kaga dayanina, 2. Qabyaaladda ha kaga dayanina, 3. wadaniyad xummadana ha kaga dayanina”
Xornimaddu laftigeedu waa u ayaan darro in ay sheegtaan aabayaasha gobanimo diidka Soomaaliyeed ee dalkii kala qoqobay, qeyb walbana cadow u dhiibay, mar haddii iyadoon aan jirin loo dabaal-degana waxaa u haboon xornimo in ay oyso.
Soomaaliya waxaa xorriyadeeda loo dabaaldegi doonaa marka la helo shanta Soomaali oo xor ah, kana madax banaan nin ay gumeystayaasha soo korsadeen oo maskaxdiisa u fekereyso sida gumeystaha.
Waxaa ayaan darro aad u weyn ah in maanta ay Soomaaliya ka jiraan dadsheeganaya aqoonyahan, siyaasi, waxgarad ama masuul oo haddana maskaxdoodu u fekereyso sida tan Amxaarka cadowga ah.
Kor ka Soomaali, qalbi ka amxaar ayaana ummadii maanta hor boodaya oo wax walba qarribay, xornimadiina ceebeeyey.
Bilaahi Caleykum, iyadoo uu Amxaar Muqdisho masaajidadeeda ku xaarayo Xornimo ma sheegan karnaa? Xornimooy lagu ceebee!!
Xornimooy waa lagu ceebeeyey, waa lagu iibsaday, waana laguu gafay ee Xornimooy Ooy! Ooy oo afkaaga furo, illinta kaa qubataa daadkeeda gumeystaha iyo kaalkaalayaashiisa ha xaaqdee.
Wixii dhaliil iyo talo ah.
Faafin: SomaliTalk.com | July 4, 2008